I-China 1.2m encibilikisa umugqa wendwangu yokukhiqiza indwangu kanye nabahlinzeki | I-Hongli
Imijovo eqondile eyenziwe ngokwezifiso nokubuyisela imigqa yokukhiqiza ye-meltblown kumakhasimende anokubekiwe okusukela ku-400mm-1600mm. Umugqa wokukhiqizwa ophindaphindwayo angeke usetshenziselwe ukukhiqiza izindwangu ze-meltblown kuphela, kepha futhi wokwenza izinto zokuhlunga uketshezi nezinto zokuhlunga umoya. Izinto zokuhlunga ze-Liquid zisetshenziselwa kakhulu emkhakheni wezokwelapha ngamanzi, embonini kaphethiloli neyamakhemikhali, ngesakhiwo esifanayo, ukunemba okuphezulu kokufafazwa, umphumela osobala, nomthamo onamandla wokubamba ukungcola nempilo ende yokusebenza. Izinto zokuhlunga umoya zisetshenziswa kakhulu ezinhlelweni zokuhlanza umoya, kufaka phakathi kepha azikhawulwanga ekuhlanzweni komoya wasendlini, ukufethelwa komoya wokufakelwa kwezimoto, njll. Kunezinzuzo zokusebenzisa kahle kakhulu kanye nomthamo ophezulu wothuli.
Umgomo wetechnology wokuncibilikisa isifutho
Inqubo engeyona eyokwesulwa ye-Melt-blown ukusebenzisa umoya oshisayo oshisayo omkhulu ukudonsa ukuhamba okuncanyana kwe-polymer encibilikayo ephuma emgodini we-spinneret we-die head, lapho kwakheka khona imicu ye-ultrafine futhi ivunyelwe esikrinini sokusetha noma se-roller, bese iba okungezona ezokwenziwa nge-self-bonding.
Umugqa wokukhiqizwa kwendwangu wonke oncibilikisiwe uqukethe isigaxa esikhipha umkhondo, ipayipi yegiya, ipayipi elincibilikayo, inhloko yokufa encibilikisiwe, i-heater yomoya, idivaysi yokudonsa, eyodwa yemukela inetha, isihlungi, iqoqo lama-electrostatic electret nelilodwa iqoqo lomshini ozenzakalelayo wokubuyela emuva kanye nomshini wokubuyela emuva. Phakathi kwalezi zingxenye, ebaluleke kakhulu yikhanda lokufa elincibilikisiwe.
Uhlelo lokusabalalisa lwe-polymer luyancibilika. Lolu hlelo luqinisekisa ukuthi i-polymer iyancibilika igeleza ngokufana kubude be-mez melt futhi inesikhathi sokugcina umfaniswano, ukuze iqinisekise ukuthi i-nozzle engancibilikisi inesakhiwo esilingana kulo lonke ububanzi. Njengamanje, uhlelo lokusatshalaliswa kokuncibilikisa uhlobo lwe-polymer lusetshenziswa ikakhulukazi kwinqubo yokufafaza yokuncibilikisa. Ngoba uhlelo lokusabalalisa lohlobo lwe-T alukwazi ukusabalalisa ngokulinganayo uketshezi. Futhi ukufana kwesifutho esibunjiwe kuhlobene kakhulu nekhanda elicibilikisiwe. Ngokuvamile, ukunemba ngomshini wokuncibilikisa kufa kuphezulu, ngakho-ke ukufa kuyabiza ukukhiqiza. Ngokuqondene ne-heater yomoya, umugqa wokukhiqizwa kwendwangu oncibilikisiwe udinga umoya omningi oshisayo. Ukukhishwa komoya okucindezelwe okuvela ku-compressor yomoya kudluliselwa ku-heater yokufudumeza ngemuva kokuhlunga kokucwilisa, bese kuba umhlangano wokulimala we-sinder. I-air heater ingumkhumbi wokucindezela, futhi ngasikhathi sinye sokumelana nokukhiqizwa komoya ophakeme kakhulu, ngakho-ke impahla kufanele ibe yinsimbi engenasici.
Ukuvuselela umugqa wokuqala womkhiqizo
Umugqa wokukhiqizwa kwendwangu owenziwe ngokwezifiso we-400-1200mm
I-Prototype yomugqa oqondile wokukhiqizwa kwenetha lomjovo:
Umugqa wokukhiqizwa kwendwangu owenziwe ngokwezifiso we-400-600mm
Umbono owandisiwe wokuxubha uyafa
* Lo msele wokukhiqiza uqukethe isikulufa esisodwa sokukhipha isisulu, isikhunta esishisayo se-extrusion, ibhande lokudlulisela, umshini wokuhambisa umoya ... njll.
* Kugcwele okuzenzakalelayo kusuka ekuphakelweni kwezinto ezibonakalayo kuya ekuqothulweni kwendwangu kokugcina okuncibilikile, ubuchwepheshe obuvuthiwe, ukugijima okuzinzile, i-PFE ingafinyelela ku-95 nangaphezulu.
* Umthamo wokukhiqiza usuka ku-280kg ~ 300kg, ubungako ngqo bokukhiqizwa buxhomeke kumshini we-extruder futhi buncibilikise usayizi wokubumba okushisayo.
Uhlobo Lokukhiqiza: Ukuphindisela & Vertical Blow Downward
I-3.Voltage: 380V / 3P / 50Hz
Izinto Ezisetshenzisiwe: I-PP
Ububanzi be-5.Product: 1200MM
Amandla we-6.Production: 280 ~ 300KG / 24Hours
7.Umiselwe uMax. Ijubane: 5M / Minute
Amandla we-8.Total: 60KV
I-9.Machine Dimension (LXWXH): 7X6X4M
I-1.55 single Screw Extrusion: 1set
I-2.Vacuum Hopper: 1set
I-3.Air yedivayisi yangaphambi kokushisa
I-7.Servo ngokungavimbeli kanye nokusika insimbi
Insizakalo Ngemuva Kokuthengisa:
I-1.Installation Video Support, nokuxhumana kwevidiyo bukhoma uma kwenzeka kulungiswa okuthile kunenkinga encane.
Izingxenye ze-2Free Spare: Ezinye izingxenye zeWorn ezifana
Iwaranti Yomshini WeWhole: unyaka owodwa